खानेपानी योजनामा बेहाल | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / पाठक पत्र / खानेपानी योजनामा बेहाल
खानेपानी योजनामा बेहाल
Posted by: युगबोध in पाठक पत्र December 29, 2014	0 286 Views
घोराही नगरपालिका वडा नं. ७, ८, ९ को खानेपानी योजना डेढ दशक पार गरी सक्दा पनि पूरा भएको छैन । करीव ढाई करोडको लागतमा निर्माण शुरु भएको यो योजनाले अहिले १५ वर्ष पार गरिसकेको छ । तर निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छैन ।
खानेपानी डिभिजन कार्यालय दाङले यो योजना २०७० सालमा नै सम्पन्न भएको भन्दै आए पनि पॉच प्रतिशत उपभोक्ता समेतले पानी पिउन पाएका छैनन् । वडा नं. ९ मा मुख्य लाइन नै गाडिएको छैन भने ७ र ८ नं. वडामा पाइप लाइन गाडिए पनि धारामा पानी चल्न सकेका छैनन् । उता मुहानमा पानीको अभावले पनि योजनालाई प्रभावित बनाएको छ भने भएको पानी पनि तयारी धारामा सञ्चालन भएका छैनन् । योजना सम्पन्न भएको हो भने समितिलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने हो । कागजी प्रक्रियामा योजना सम्पन्न भए पनि वास्तवमा योजना अधुरै भएका कारण उपभोक्ता समितिले पनि योजना जिम्मा लिन चाहेको छैन ।
खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालयमा उपभोक्ताहरु गइरहेका छन् । तर न खानेपानी कार्यालयले यो विषयमा स्पष्ट कुरा दिन्छ न त उपभोक्ता समितिले नै । उपभोक्ता समितिले पनि जिम्मेवार भएर काम नगरेको हो कि जस्तो देखिन थालेको छ । न त समितिको साधारणसभा बसेको थाहा छ न त हालसम्म भएका उपलब्धि र योजना सम्पन्न हुन नसक्नुका कारणबाट उपभोक्ता जानकार छन् । यो खानेपानी योजनामा भएको गैरजिम्मेवारीपन र ढिलासुस्ती कसको कारणले भएको हो, यसमा कतै भ्रष्टाचार र अनियमित त भएको
छैन ? यस विषयमा सर्वत्र शंका उब्जिएको छ । अब योजनालाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न र वास्तविकता बाहिर ल्याउन आवश्यक छ । यसो भएन भने उपभोक्ताहरु संघर्ष गर्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
Previous: सन् २० को पर्यटन दृष्टिकोण र कमजोर पूर्वाधार
Next: सुरक्षित र सुन्दर दाङ बनाउने अभियान